ဆငျတုပျကှေးနဲ့ပတျသကျလို့ မေးခငျြနမေယျ့ မေးခှနျးမြား - DVB
ခုတလော လူတကာနှုတျဖြားမှာ ခတျေစားနတောက ဆငျတုပျကှေးလို့ချေါတဲ့ (Chikungunya) ပါ။ ဒီတုပျကှေးကို နာမညျသာကွားဖူးနတေယျ၊ ဘာရယျလို့ သသေခြောခြာမသိဘူး ဆိုပွီးဖွဈနလေား။ ဒါဆိုရငျတော့ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဖတျကွညျ့လိုကျပါနျော။
ဆငျတုပျကှေးနဲ့ပတျသကျလို့ ဒါတှကေို ဇဝဇေဝါဖွဈနလေား
ဆငျတုပျကှေးက အခုတလောတျောတျောမြားမြားဖွဈနကွေတာပါ။ ခွငျကနတေဆငျ့ဖွဈတဲ့ရောဂါပေါ့။
ကာကှယျဆေးက ရာသီတုပျကှေးကိုပဲကာကှယျနိုငျတာပါ။ ဆငျတုပျကှေးရောဂါပိုးကို မကာကှယျနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တုပျကှေး ကာကှယျဆေးထိုးထားတာပဲဆိုပွီး ခပျပေါ့ပေါ့မနစေခေငျြပါဘူး။
လူတဈယောကျကနေ တဈယောကျကို ကူးစကျနိုငျလား……..
ဆငျတုပျကှေးက ရောဂါပိုးသယျဆောငျထားတဲ့ ခွငျကိုကျခံရမှုကနတေဆငျ့ပဲ ကူးစကျတာပါ။ ရောဂါခံစားနရေတဲ့လူကို ကိုငျတှယျထိတှမေိ့တာကွောငျ့ မကူးစကျနိုငျပါဘူး။ တုပျကှေးဆိုပမေယျ့ လထေဲကနေ ကူးစကျတာမြိုးလညျး မရှိပါဘူး။
ဆငျတုပျကှေးဖွဈတဲ့အခါ ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ခြိုးပေးတာက ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အဆဈတှနေဲ့ကွှကျသားတှေ နာကငျြကိုကျခဲမှုကို သကျသာစမှော အသအေခြာပါ။
ဆငျတုပျကှေးရောဂါပိုးက မိခငျနို့ကနတေဆငျ့ မကူးစကျနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဆငျတုပျကှေးရှိနရေငျတောငျ ဘဘေီလေးကို မိခငျနို့ဆကျတိုကျပါ။
ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အနီရောငျအဖုအပိမျ့တှကေ သကျသာပါ့မလား…….
ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အနီရောငျအဖုအပိမျ့တှကေ အဖြားသကျသာမှုနဲ့အတူ တဖွညျးဖွညျးခငျြးသကျသာသှားမှာပါ။
အဖြားပြောကျပမေယျ့ အဆဈတှကေိုကျတာက လနဲ့ခြီပွီး ကနျြခဲ့နိုငျသလို အခြို့တှမှောဆိုရငျ ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အဆဈတှနောကငျြမှုက တဈနှဈလောကျအထိကွာတာမြိုးတောငျဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေ ၃ ရကျကနေ ၁၀ ရကျအတှငျးမှာ တဖွညျးဖွညျးခငျြးသကျသာလာမှာပါ။
ဆငျတုပျကှေးဖွဈတဲ့အခါ အာဟာရပွညျ့ဝအောငျစားသုံးပေးပါ။ အထူးသဖွငျ့တော့ ဗီတာမငျ C ပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှနေဲ့ ဗီတာမငျ E ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှကေို မြားမြားလေးစားပေးပါ။
ဆငျတုပျကှေးက အဖြားကွီးစနေိုငျတယျဆိုပမေယျ့ လူကိုသစေနေိုငျတာမြိုးတော့မရှိပါဘူး။ ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့သဆေုံးနိုငျခွကေ ၁ ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲရှိတာပါ။
ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့အဖြားတကျတဲ့အခါ အဖြားစဝငျစ ပထမရကျနဲ့ ဒုတိယရကျအတှငျးမှာ ကိုယျအပူခြိနျက ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျလောကျအထိမွငျ့တကျနိုငျပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ပွနျကသြှားနိုငျပါတယျ။
ဆငျတုပျကှေးကို ကာကှယျဖို့ ကာကှယျဆေးမရှိပမေယျ့ ခွငျကိုကျမခံရအောငျ ကာကှယျတာက အကောငျးဆုံးသော ကာကှယျမှုပါ။
ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့ အဆဈတှကေိုကျတာကို သကျသာအောငျလုပျလို့ရလား….
ဆငျတုပျကှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အဆဈတှကေိုကျတာကမနကျခငျးပိုငျးမှာ ပိုဆိုးနိုငျပွီး ဒီဝဒေနာကို သကျသာစဖေို့ဆိုရငျ ရအေေးဝတျကပျပေးလို့ရသလို ရနှေေးနှေးလေးထဲကို ဆားထညျ့ပွီး စိမျပေးလို့လညျးရပါတယျ။
ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသ
ဆင်တုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒါတွေကို ဇဝေဇဝါဖြစ်နေလား
ကာကွယ်ဆေးက ရာသီတုပ်ကွေးကိုပဲကာကွယ်နိုင်တာပါ။ ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာပဲဆိုပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့မနေစေချင်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ကို ကူးစက်နိုင်လား……..
ဆင်တုပ်ကွေးက ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်ထားတဲ့ ခြင်ကိုက်ခံရမှုကနေတဆင့်ပဲ ကူးစက်တာပါ။ ရောဂါခံစားနေရတဲ့လူကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မိတာကြောင့် မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ တုပ်ကွေးဆိုပေမယ့် လေထဲကနေ ကူးစက်တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။
ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ချိုးပေးတာက ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆစ်တွေနဲ့ကြွက်သားတွေ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေမှာ အသေအချာပါ။
ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးက မိခင်နို့ကနေတဆင့် မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆင်တုပ်ကွေးရှိနေရင်တောင် ဘေဘီလေးကို မိခင်နို့ဆက်တိုက်ပါ။
ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနီရောင်အဖုအပိမ့်တွေက အဖျားသက်သာမှုနဲ့အတူ တဖြည်းဖြည်းချင်းသက်သာသွားမှာပါ။
အဖျားပျောက်ပေမယ့် အဆစ်တွေကိုက်တာက လနဲ့ချီပြီး ကျန်ခဲ့နိုင်သလို အချို့တွေမှာဆိုရင် ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆစ်တွေနာကျင်မှုက တစ်နှစ်လောက်အထိကြာတာမျိုးတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးပေးပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ဗီတာမင် E ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို များများလေးစားပေးပါ။
ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပါရစေ။ ရောဂါတိုင်းက လက္ခဏာတစ်ခုလောက်တော့ အနည်းဆုံးပြတတ်စမြဲပါ။ ဆင်တုပ်ကွေး စဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ကိုယ်ပူမယ်။ အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ခဲမယ်။ နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အားမရှိသလိုဖြစ်ပြီး နုံးတာ၊ ကြွက်သားတွေနာကျင်လာတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ အရေပြားမှာ အနီရောင်အကွက်တွေဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆင်တုပ်ကွေးက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ဒါကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးတွေသောက်လို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ အဖျား က ၃ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုခံယူလို့ ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူတာလိုမျိုး ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။ ရေများများသောက်ဖို့လည်း မမေ့သင့်ပါဘူး။
ဆင်တုပ်ကွေးက အဖျားကြီးစေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် လူကိုသေစေနိုင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးနိုင်ခြေက ၁ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတာပါ။
ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်အဖျားတက်တဲ့အခါ အဖျားစဝင်စ ပထမရက်နဲ့ ဒုတိယရက်အတွင်းမှာ ကိုယ်အပူချိန်က ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်အထိမြင့်တက်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆစ်တွေကိုက်တာကမနက်ခင်းပိုင်းမှာ ပိုဆိုးနိုင်ပြီး ဒီဝေဒနာကို သက်သာစေဖို့ဆိုရင် ရေအေးဝတ်ကပ်ပေးလို့ရသလို ရေနွေးနွေးလေးထဲကို ဆားထည့်ပြီး စိမ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
Previous story မွယောပွဿနာ (ဥပဒရေေးရာ အမေးအဖွေ)
Next story အမွနျလမျး ၁၇ မိုငျအနီး တောဆငျရိုငျး ၂ ကောငျကို မဆေ့ေးသနေတျဖွငျ့ ပဈခတျဖမျးဆီး